एशियाडको तयारीका लागि कोलकाता पुगेका एथ्लेटिक्स खेलाडी किन फर्किए ? | | Neplays.com
एशियाडको तयारीका लागि कोलकाता पुगेका एथ्लेटिक्स खेलाडी किन फर्किए ?
By Neplays	 Last updated Jul 25, 2018
नेप्लेज,७ साउन । आसन्न एशियन गेम्सको तयारीमा रहेको एथ्लेटिक्सका खेलाडी बैदेशिक प्रशिक्षणका लागि भारतको कोलकाता गएकोमा प्रशिक्षणको बाताबरण नभएपछि फर्किएर आएका छन ।
भदौ २ गतेबाट हुने एशियाडका लागि विशेष प्रशिक्षण गर्ने भनेर एथ्लेटिक्सका ६ खेलाडी र १ प्रशिक्षक भारतको कोलकाता पुगेका थिए । तर त्यहाँ पुगेको ३ दिन पछि नै ३ जना खेलाडी स्वदेश फर्किएका छन । कोलकाताको बढ्दो गर्मी त्यसमा पनि प्रदुशणका कारण उनिहरुले प्रशिक्षण गर्न सकेनन ।
उच्च गर्मीका कारण खेलाडी विरामी पर्ने डरले खेलाडी फर्किएका हुन । बैदेशिक प्रशिक्षणका लागि नेपाल एथ्लेटिक्स संघको पहलमा खेलाडीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले भारत पठाएको थियो । तर म्याराथनका खेलाडीका लागि कोलकातामा रोडमा दौडन नमिल्ने भएकाले उनिहरु स्वदेश फर्किएका हुन ।
एशियाडका लागि भारतका एथ्लेटिक्सका खेलाडी भुटानमा गएर प्रशिक्षण गरिरहेका छन । तर नेपालका खेलाडीलाई भने गर्मी पचाउन भनेर भारत पठाइएको थियो । जसमा छोटो दुरीका खेलाडीहरु अहिलेपनि कोलकातामा नै प्रशिक्षण गरिरहेका छन तर म्याराथनका खेलाडी भने उचित बाताबरण नभएपछि फर्किएका छन ।
यतिबेला कोलकाताको गर्मी ४४ डिग्रीसम्म पुग्ने गरेको छ । बैदेशिक प्रशिक्षणका नाममा खेलाडी कस्तो ठाँउमा जादैछन कसरी प्रशिक्षण गर्दैछन भन्ने कुरा हचुवाको भरमा गरेपछि त्यसको मर्का खेलाडीमा परेको छ ।